Ukubhalwa komntu kunye nomxholo we-axis ye-Google Play Music | Iindaba zeGajethi
Umxholo uya kuthatha inqanaba lesiseko kuthotho lweapps zikaGoogle. Umxholo yenye yezona zinto zichonga uMncedisi kaGoogle kumandla Cinga le mibuzo ilandelayo yomsebenzisi ngaphandle kokuphindaphinda umxholo ophambili wabo ngalo lonke ixesha.
Ese umxholo ngumdlali ophambili kulungiso uluhlu olupheleleyo lweGoogle Play Music eziza kubonisa uluhlu olucetyiswayo ngalo lonke ixesha iapps ivulwa ngokwedatha ethathwe kwiakhawunti yomsebenzisi kaGoogle, njengokhangelo olwenziwe, indawo kwiimephu kunye nezinye ezininzi.
Inkqubo yokudlala uMculo ijolise kwi ukwenziwa komntu kunye nemeko ukunikezela ngescreen sokuncoma esiya kwahluka ngalo lonke ixesha ivulwa. Oku kukuthi ukuba uqala isicelo ngobusuku bangoMgqibelo, uluhlu lokudlala olunxulumene nalo mzuzu luya kuvela. Kwelinye icala, ukuba uyayenza ngeCawa emva kwemini, eyona nto iqhelekileyo kukuba ngumculo onxulumene nexesha lokuphumla, okanye ezo uhlala umamela kuzo ziintandokazi zakho ezikhuthaza imeko yokuphumla.
Kulapho i «yokufunda umatshini»Okanye ubuchule besicelo sokufunda kumsebenzisi njengoko beyisebenzisa. Ngokusengqiqweni, ngakumbi xa kudlalwa uMculo, iingcebiso ezininzi zinokwenziwa ngokwenye.
ujongano ihlaziywa kwisitayile samakhadi kuGoogle Ngoku, kodwa okuthethwayo, Dlala uMculo uhlaziywa ukuze uhambelane noko kubizwa «umxholo» uMncedisi anayo kunye ne-axis esembindini eya kuthi ukusukela ngoku ukuya kwiimveliso ezahlukeneyo zebhasi enkulu yeG. eyunivesithi ngentsasa yangoMvulo xa imvula inethayo kwaye Dlala uMculo uya kuthatha yonke loo datha ukukubeka owona mculo ufanelekileyo ngalo mzuzu okanye loo mzuzu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukudlala umculo kuGoogle kuhlaziywe ngokupheleleyo ukugxila kumxholo
I-GoPro inyanzeliswa ukuba irhoxise i-Karma drone yayo